Green asparagus rolls yakaputirwa mu carpaccio | ThermoRecipes
Asparagus uye carpaccio rolls
Kutanga15 maminitsi4 vanhu150 makarori
kubudikidza Irene Arcas
Iro resipi rinonaka! Isu tichagadzira mamwe magirini asparagus roll akaputirwa mu carpaccio, ane kupuruzirwa kwakanaka kwemafuta omuorivhi uye Parmesan cheese. Iyo inoshamisa yekutanga kana isu tine chiitiko chakakosha, uye zvakadaro saka zvakapusa zvekuti zvinoita sejee. Asi yakanaka kwazvo kana iwe uchiiputira uye musanganiswa wekunaka uye magadzirirwo akanaka.
Tine nzira mbiri dzekugadzirira asparagus: yakabikwa mu varoma kana kuti yakananga yakabikwa pane grill mupani. Chero zvaungada, zvakanaka chero nzira.
Ndinokurudzira kuti utore carpaccio kubva mufiriji 30 maminitsi zvisati zvaitika sezvo nenzira iyi haizove inotonhora uye paunoputira zvimedu pamusoro peasparagus inopisa ichagara pakupisa kwakakwana.
1 Asparagus uye carpaccio rolls
2 MU THERMOMIX
Green asparagus rolls yakaputirwa mu carpaccio, ine kuputika kwakanaka kwemafuta omuorivhi uye Parmesan cheese. Iyo yakanaka yekutanga kana isu tine chiitiko chakakosha. Zvinotora nguva shoma zvikuru kuzvigadzirira.
Kubika nguva: 15M
12 fresh green asparagus kana gobvu kana 24 kana yakatetepa
12 zvimedu zve carpaccio
Isai asparagus yakachena isina zvikamu zvakaoma mutireyi yevaroma. Isa munyu mushoma wochengeta.
Dururira 800 g yemvura mugirazi, isa tireyi neasparagus uye purogiramu 12-18 maminetsi, tembiricha yevaroma, kumhanya 2 (zvichienderana nekukora kwadzo).
Isai teaspoon yemafuta mupani uye gadzirai asparagus kuitira kuti zvive crispy mukati uye toasty kunze.
Kunyangwe iwe wakazvigadzira mu thermomix kana mupani, inguva yekugadzirira ma rolls edu. Isu tinoisa asparagus (kana 2 kana iine magumo) muchidimbu che carpaccio uye tinoputira zvakanyatsonaka kuitira kuti nyama irege kuputsa (iyo yakaoma zvikuru nokuti inopera).
Isa mipumburu mundiro wowedzera kupfapfaidza kwemafuta omuorivhi, Parmesan cheese uye mashoma maflakes emunyu wakakora.
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Zvinokanganisa, Chikafu chine utano, Nyore, Asingasvike maminetsi gumi nemashanu
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » General » Nyore » Asparagus uye carpaccio rolls
Couscous ine marinated huku nemiriwo
Sponge cake neorenji nemafuta omuorivhi